Sepp Blatter oo Markii Shanaad loo doortay madaxweynaha FIFA – Radio Daljir
Sepp Blatter oo Markii Shanaad loo doortay madaxweynaha FIFA
Maajo 30, 2015 1:05 b 0
Sabti, May 30, 2015 (Daljir) — Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee FIFA ayaa maanta markii 5-aad u doortay Hoggaamiyaha FIFA, Joseph Sepp Blatter, iyadoo dib u doorashada Blatter ay kusoo aadayso xilli xiriirka ay lasoo gudboonaadeen fadeexad dhanka musuq-maasuqa ah oo loo xirixray Saraakiil ka tirsan xiriirka FIFA.
Sepp Blatter oo 79-jir ah ayaa doorasho maanta ka dhacday Magaalada Zurich ee Wadanka Switzerland wuxuu kaga adkaaday musharraxii la tartamayay ee u dhashay dalka Jordan, Ali Bin Al-Hussein, kaasoo soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweynihii hore ee FIFA Sapp Blatter.
Madaxweynaha dib loo doortay ee FIFA ayaa helay Codad dhan 133, halka Murashaxii la tartamayay ee Ali Bin Al-Hussein oo 39-jir ah uu isna ka helay 73-cod, isagoo sheegay in uusan galayn wareeg labaad oo tartan ah.
“Waan ku faraxsanahay Guusheyda, Waxaan kaloo jeclahay Shaqadeyda iyo inaan idin la joogo,” ayuu yiri Sepp Blatter markii la doortay kaddib, isagoo mar kale yiri. “Mar labaad waxaan ballanqaadayaa inaan horumarin doono xiriirka FIFA.”
Ali Bin Al-Hussein oo isaguna hadlay doorashada looga adkaaday kaddib ayaa sheegay in uu aad u soo dhaweynayo doorashada dib loo doortay Blatter, isagoo xusay in qofkood uu ku guuleysan lahaa doorashada, uuna isagu guuleystay.
“Xiriirka FIFA oo dhan, Gaar ahaan Madaxweynaha dib loo doortay Waxaan marka hore ugu hambalyeyn lahaa sida ay doorashadu u dhacday oo xaq ahayd, waxaan kaloo idin ka codsanayaa inaad howsha halkeeda kasii waddaan… aniguna waa idin la shaqeyn doonaa,” ayuu yiri Bin Al-Hussein.
Dhanka kale, Madaxa Xiriirka UEFA ee Qaaradda Yurub, Micheal Platini oo Doorashada kaddib hadlay ayaa ku goodiyay inay jarayaan wada-shaqeynta kala dhexeysa FIFA, isgaoo intaas ku daray inuu u hambalyeynayo murashaxa laga guuleystay iyo guud ahaan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA.
Platini ayaa ka mid ahaa 53-xubnood oo taageersanaa Murashaxa kale ee Bin Al-Hussein, iyadoo Guddoomiyaha ururka ciyaaraha Yurub, Greg Dyke uu isna Goobta ka sheegay in Britain ay ku goodisay inaysan ka qaybgalayn koobka Adduunka ee dhici doona sannadka 2018-ka haddii dalalka kale ee Yurub ay go’aankaas wadajir ku noqdaan.
“Xiriifka UEFA sharaf weyn ayay u tahay inay taageeraan in Hoggaanka FIFA uu is-bedel ku yimaado, waayo waxaa naga go’an inaan soo celinno sumcadda xiriirka FIFA. Waxaana rumeysanahay in aragtideydu ay muhiim tahay, anigoo u mahadceliyo saaxiibkey Bin Al-Hussein oo aan aniga iyo xubno kale aan si weyn u tageersanayn in la doorto,” ayuu yiri Platini.
Michel Platini ayaa Hadalkiisa ku daray in Xiriirka Kubadda Cagta ee UEFA ay Kulan ku yeelan doonaan todobaadka soo socda magaalada Baarliin ee dalka Jarmalka, ayna ka hadli doonaan arrimo la xirira isbedel la’aanta hoggaanka xiriirka FIFA.
Ugu dambeyn, Joseph Sepp Blatter ayaa yiri. “Innagu ma rabno inaan kacdoono abuurno, balse waxaan doonaynaa inaan horumar sameyno. Waxaana sheegayaa inay dhici karto in Xubnaha Qaarkood ay yiraahdaan muddo dheer ayuu Xilka hayaa, Kuwana ay yiraahdaan sidaas si la mid ah; waxaanse idiin sheegayaa inaan Xilligii FIFA aan u hayay Hoggaanka waa mid aad u gaaban.\_”
Si kasta ha ahaatee, dib u doorashada Sepp Blatter ayaa imaanaysa xilli madaxda xiriirrada caalamka qaarkood ay ku hanjabeen inaysan dib u dooran doonin Blatter ayna Murashaxa kasoo horjeeda dooran doonaan; inkatsoo Xalaaddu ay isku bedeshay sidaas ayna noqotay in mar shanaad dib loo doorto madaxweynaha FIFA Sepp Blatter.
Soomaali-American-kii ugu Horreeyay oo loo Dhaariyay Booliiska Magaalada Portland
Xildhibaanada Kenya oo dalbaday in Madaxweyne Obama uu Khudbad ka jeediyo Baarlamaanka
on FURSAD SHAQO: WFP, XAFIISKA BOSASO, (Business Support Assistant)waxan ahay shaqo radis darawal ah